Andreas Christensen oo ka hadlay mustaqbalkiisa kooxda Chelsea – Gool FM
Andreas Christensen oo ka hadlay mustaqbalkiisa kooxda Chelsea
(Chelsea) 14 Nof 2018. Laacibka reer Denmark ee Andreas Christensen ayaa walaac ka muujiyay xaalada uu xili ciyaareedkan kaga sugan yahay kooxda Chelsea.
Andreas Christensen ayaan wax kulan ee horyaalka Premier League ah kasoo muuqan kooxda reer London ee Chelsea xili ciyaareedkan, balse wuxuu ciyaaray 4 kulan UEFA Europa League iyo 2 kulan ee ah Carabao Cup.
Laacibka reer Denmark ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Mirror” ee dalka England wuxuu kaga hadlay mustaqbalkiisa kooxda Chelsea.
“Waxaa jira farqi u dhexeeya xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay, waxaan ciyaaray kulamo badan, laakiin xili ciyaareedkan lama mid ahan kii hore, waa wax aad ugu adag ciyaaryahanka, balse waan arki doonaa waxa dhaca”.
Intaas kadib Andreas Christensen ayaa wax laga weydiiyay in saraakiisha kooxda Chelsea uu ka dalbanayo in ay ka fasaxaan garoonka Stamford Bridge.
“Waa su’aal adag, hadii aad weydiisato ciyaaryahan aan ciyaarin, wuxuu noqonayaa mid aanan faraxsaneen, qof kastaa wuxuu doonayaa inuu ciyaaro, laakiin waan ka war qabaa inay muhiim tahay in aan tababar adag sameeyo, si aan u helo fursad”.
“Waa inaan si fiican u shaqeeyo si aan u tuso macalinka in uu ku kalsoonaan karo awoodeyda ciyaareed, ma ahan inaad fadhido isla markaana aad sugto fursada aad ku ciyaari lahayd oo kaliya, taas ayaana ah sababta aan u ciyaareyno kubada cagta”.
“Xaaladayda waa mid ka duwan xili ciyaareedkii hore, mana u maleynayo inaan ka tagayo bisha soo aadan ee Janaayo”.
“Dib ugu soo laabashadeyda kooxda Manchester United wuxuu ahaa dareenka ugu fiican”- Pogba